Qaab kale oo loo adeegsado muuqaallo soo degsan
Qaab kale oo loo adeegsado muuqaallo soo degsan Bilood 2 3 maalmood ka hor #1804
Waxaan isku dayay inaan rakibo muuqaal dhameystiran oo Xaawo ah, laakiin waqti kasta oo aan doonayey inaan ku dhex shaqeeyo gudaha P3Dv4.5, Waxaan helay dhambaal qalaad, oo aanan fahmin.
Marka waxaan u fakaray hab kale oo aan ku helo qurxinta gudaha diyaaradda gudaheeda.
Ka dib markaan sifeeyay dhammaan muuqaallada, oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, waxaan u kala saaray kaliya "khariidadda muuqaalka" iyo "khariidadda udub-dhexaadka ah" oo waxaan ku soo guuriyey khariidadda "Global" gudaha khariidadda muuqaalka ugu weyn ee P3Dv4.5.
tusaale ahaan C: \_ faylasha Barnaamijka \_ Qufulka Martin \_Prepar3D v4 \_ Muuqaalka \_ Caalamka
Dib-u-bilaabida kadib, wax walbaa way ila shaqeeyaan.
Hab isku mid ah ayaa loo adeegsan karaa muuqaalka Yurub iyo garoomada diyaaradaha.
Kaliya dhig khariiddada "EURW" ama "EURE".
tusaale ahaan C: \_ faylasha Barnaamijka \_ Qufulka Martin \_Prepar3D v4 \_ Muuqaalka \_ EURW